(Daawo) Dowlada qaabkan ayaan wadanka u fureynaa: Xeerarka cusub - NorSom News
Home Covid-19 (Daawo) Dowlada qaabkan ayaan wadanka u fureynaa: Xeerarka cusub
Waxaa maanta oo khamiis ah la bilaabay wareega labaad ee dib u furitaanka Norway, waxaana la fududeeyay qaar kamid ah sharciyadii adkaa ee xakameynta coronaha, gaar ahaana karantiilka hotellka oo dad badan laga dhaafay.
Wasiiradda dowlada iyo madaxda hey´addaha caafimaadka ayaa shaley qabtay shir jaraa´id oo ay uga hadlayaan xaalada dhaqangalinta xeerarka cusub iyo qaabka loo wajihi doono.
Halkan ka daawo wasiiradda dowlada oo si faah-faahsan uga hadlayo xaalada cusub iyo xeerarka maanta ka bilaaban doono.
Previous articleQaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka oo diiday qaadashada talaalka: Sababtan awgeed.
Next articleSweden oo dadka Norway uga imaanaya ka dhaaftay shardigii baaritaanka Corona.